I-trailer yeNtente yeRancho
Igumbi lakho lokulala e ikharaveni sinombuki zindwendwe onguJeff & Juli
IRancho Relaxo Resort yenye yeendawo ekuchithelwa kuzo iiholide eco-tourism yokuqala yaseAlberta ebonisa iinkqubo zamandla ahlaziyekayo, ukuveliswa kokutya okuphilayo, isivuno samanzi, ukugcinwa kokutya, iikhabhinethi zelogi ezingaphandle kwegrid, kunye nentaphane yezinye iimbono zokunceda iintsapho zihambe ziye ekuzifumaneni ngokwazo, ukhuseleko lokutya, kunye noluntu olusempilweni.
Siyathanda ukudlala umculo, ukufunda, igadi (ngaphakathi nangaphandle) sonwabele indalo NGAZO ZONKE iindlela nangayo nayiphi na into ebandakanya ukwakha uluntu ngentshukumo yokutya yasekhaya.
Le trailer yentente epholileyo incinci ye-10 yindawo entle ukonwabela ubutofotofo be-RV kodwa ilula kwaye ingabizi. Indawo ibandakanya isithando somlilo sepropane, izibane, isitovu sangaphandle kunye ne-BBQ, i-awning, indlu yangasese ekufutshane kwisakhiwo esahlukileyo, kunye neebhedi ezi-3 (ukumkanikazi, kabini, kunye noyedwa). Itreyila ilungile kusapho okanye isibini esingathanda indawo yaso yabucala.
Ngaba uyimvumi? Unokuthanda indawo yejam yomculo eneziginkci, ii-amps, igubu kunye nee-mics ukuba ufuna ukuzama into entsha okanye ukuziqhelanisa nejam yakho. Yiza nezixhobo zakho kwaye udlale kunye nebhendi yosapho lwethu, iGarden Variety Rockstars. Ngaphandle, kukho iidekhi ezi-3 zokuhlala, umzila wokuhamba, intambo yokujingi, isakhiwo sebala lokudlala, ibhokisi yesanti enkulu, imigodi emi-2 yomlilo, kunye nee-hammocks ezimbalwa emithini. Kukho iibhayisekile zabantwana ezimbalwa ezinokusetyenziswa nazo.
Lo mhlaba ukwiikhilomitha ezili-12 ukusuka kwidolophu yaseRocky Mountain House, enazo zonke iinkonzo ezikhoyo. Bambalwa kakhulu abamelwane ukuze inike iimbono ezintle zembonakalo yomhlaba ejikelezileyo kubandakanya iiNtaba zeRocky ukuya ngasentshona. Ukuphuma nokutshona kwelanga kudla ngokuba ngumtsalane. Ungcoliseko lokukhanya oluncinane ebusuku luthetha ukuba ukujonga iinkwenkwezi kuyinto engaqhelekanga!
Umbuki zindwendwe ngu- Jeff & Juli
Ukuhlalisana yinto esiyiyo sonke! Singathanda ukuncokola ngayo nayiphi na imixholo yamva nje enika umdla kunye/okanye eshushu. Siyakuthanda ukutshintshiselana ngemibono kuzo zonke izinto, ngakumbi izihloko ezifana nokuphila okuzinzileyo, ukufunda ekhaya, ukhuseleko lokutya, umgangatho wokutya, i-vegan vs i-omnivorous diet, i-psychedelics njengeyeza, i-monogamy vs. polyamory, ukusemthethweni kwe-cannabis, kwaye ngokuqinisekileyo zonke iingcamango zamva nje zeyelenqe. Tsala isitulo ujikeleze umlilo!
Ukuhlalisana yinto esiyiyo sonke! Singathanda ukuncokola ngayo nayiphi na imixholo yamva nje enika umdla kunye/okanye eshushu. Siyakuthanda ukutshintshiselana ngemibono kuzo zonke…